Taariikh Nololeedka Jilaaga Geeriyooday Inder Kumar | Filimside –
Taariikh Nololeedka Jilaaga Geeriyooday Inder Kumar
Jul 28, 2017 - 1 Jawaab
Jilaaga Bollywood-ka ka tirsanaa Inder Kumar ayaa geeirooday asigoo 43-jir ah waxaana kusoo booday wadno xanuun xili uu gurigiisa joogay.
Hadaba shabakada Filimside waxay isku soo aadisay macluumaad walbo oo jilaagaan laga diiwaan galiyay:
Inder Kumar Iyo Bilawgiisii Fanka Hindiya:
Inder Kumar sanadii 1996 ayuu Bollywood-ka kusoo biiray filimkiisii kowaadna wuxuu ahaa Masoom wuxuuna noqday Hit dhameestiray.
Isla sanadii 1996 Inder Kumar wuxuu door caawiye ku yeeshay filimkii Super Hit-ka weyn noqday Khiladiyon Ka Khiladi weliba Akshay Kumar walaalkiis ka yar ayuu ku matalay waana mid ka mid ah doorarkiisa ugu caansan ee ebid filim Hindi ah ku yeesho.
Inder Kumar sanadii 1997 wuxuu la yimid filimkii Ghoonghat ee ganacsi ahaan bur buray sidoo kalena Ayesha Jhulka isla jileen.
Sanadii 1998 Inder Kumar wuxuu la yimid labo filim midkiisii kowaad wuxuu ahaa filimka Dand – Nayak ee Flop-ka noqday waana filim Soomaalida aad u taqaan waxaana la jileen Manek Bedi, Ayesha Jhulka iyo Naseeruddin Shah.
Filimkiisii labaad sanadii 1998 wuxuu ahaa Tirchhi Topiwale oo isagana Flop noqday waxaana la jileen Chunky Pandey, Monica Bedi iyo Rituparna.
Inder Kumar Iyo Markii Uu Atoore Caawiye Isku Badalay:
Madaama aflaantii uu hogaamiye ka noqday badankooda guul dareesteen si uusan Bollywood-ka kaga bixin wuxuu aqbalay inuu hada kadib filimada door caawiye ama atoore labaad ku jilo.
Sidaa darteed bilawgii qarnigaan wuxuu isku badalay atoore caawiyaha ugu caansan Bollywood-ka asigoo door caawiye ku yeeshay filimada Baaghi, Kunwara, Kahin Pyaar Na Ho Jaaye, Gaja Gamini, Maa Tujhhe Salaam, Tumko Na Bhool Paayenge, Maseeha iyo kuwo kale dhamaantoodana ganacsi ahaan wey guul dareesteen.
Inder Kumar asigoo aad u jah wareersan oo xitaa weesan inuu filimada door caawiye ah ku matalo wuxuu kusoo laabtay filimkii Wanted ee Salman Khan hogaamiye ka ahaa asigoo ku jilay Sallu saaxiibkiis sidoo kalena doorkiisa lagu amaanay.
Inder Kumar Iyo Markii Uu Sameynta Musal Salada Bilaabay:
Inder Kumar in ka badan 20-filim oo Hindi ah ayuu sameeyay kadib wuxuu garwaaqsay inuu dhanka Tv-yada u weecdo si magaciisa uusan u lumin.
Sidaa darteed wuxuu amaan lixaad leh ku helay musal salkii Kyunki… Saas Bhi Kabhi Bahu Thi (2000-2008) wuxuuna xalqo ahaan ka koobnaa 1833 doorkiisana waxaa loogu yeerayay Mihir Virani
Markale ayuu TV-yada dib ugu soo laabtay wuuxuna la yimid musal salkii laga wada helay Fear Files (2013).
Atoorayaasha Caanka Ah Ee Uu La Shaqeeyay Inder Kumar:
Mudada 21-sano ee uu Bollywood-ka ka tirsanaa Inder Kumar wuxuu la shaqeeyay inta badan atoorayaasha Bollywood-ka ugu caansan sida Akshay Kumar, Salman Khan, Shah Rukh KhanS, anjay Dutt, Govinda, Suniel Shetty iyo kuwo kale.
Inder Kumar Iyo Murankii Uu Dhexda Ka Galay 2014:
25-kii April 2014 Inder Kumar xabsiga ayaa la dhigay kadib markii haweeney kusoo eedeesay inuu kufsi u geestay, booliska baaritaan ayay sameeyeen waxayna ogaadeen in falkaan Inder Kumar ku lug lahaa.
10-kii June 2014 Inder Kumar damaanad ayaa lagu soo daayay markii uu ku adkeestay inuusan wax qalad ah galin sidoo kalena haweeneyda soo dacweesay uusan kufsi u geesanin.
Inder Kumar Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Inder wuxuu guur waqti gaaban la wadaagay Sonal Raju Kariya sanadii 2003 balse guurkooda 5-bilood ayuu kusoo idlaaday!
Kadib Inder Kumar wuxuu guursaday Pallavi Sarraf mudo ayay isla noolaayeen wuxuuna geeriyooday ayadoo xaaski ah sidoo kalena waxay u dhashay ama uu ifka kaga tagay gabbar lagu magacaabo Khushi.
Inder Kumar Geeridiisii Iyo Shaqo Uu Hada Haayay Hadii Ay Jirtay:
Inder Kumar haatan wuxuu duubis ku waday filimka Phati Padi Hai Yaar oo shaqadiisa meel dhexe u mareesay balse wuxuu geeriyooday xalay saacada Hindiya marka ay ahayd 2:00 habeenimo (28 July 2017) asigoo ku sugan gurigiisa xaafada Andheri Mumbai ka tirsan kadib markii wadno xanuun kusoo booday.
Waxaa Aqriyay: 3,015
Inder Kumar Film weyn oo u matalay oo Sanjay Dutt iyo Adity Panchooli uu la matalay.